Guri, guri | January 2020
Waxaa soo baxday in boodada laga helay kaliya ma ahan xayawaanka. Waxaa jira bood bani'aadam ah. Markii hore, waxay ku nooshahay oo kaliya koonfurta America, waxaana hadda ku noolaa meel kasta oo qof. Qaniinyada cayayaankaasi waxay dadka ku keenaan dhibaato badan. Ma joogaan jidhka bini-aadamka mar walba, sababtoo ah marka la barbardhigo jidhka xayawaanka, maaha mid caleenta cufan.
Qaylo-dhaan gudaha ah laguma tirin karo dadka la doonayo iyo kuwa faa'iido leh ee guriga! Waxay dadka u weeraraan, qaniinaan, waxayna keenaan dhibaatooyin badan. Dib u dhiciddooda burburintoodu maaha mid u qalma, sababtoo ah bukaan-socodka ayaa ku dhufan doona xawaare adag. Sida loola dagaalamo? Haddii guriga xayawaanka guriga ku jiraa, waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa inay soo saaraan dulin.
Saaxiibada ugu fiican ee dadku waa xayawaan. Qoysaska intooda badani waxay leeyihiin xayawaan furan gurigooda ama guriga - bisad ama eey. Tani waa farxad weyn, laakiin sidoo kale waa masuuliyad, taas oo ka mid ah daryeelka caafimaadka xayawaanka. Badanaa, xayawaanku waxay la qabsadeen waxyeello caadi ah - boodada iyo shilinta. Waxaad u baahan tahay inaad wax ka qabato dhibaatadan sida ugu macquulsan.
Dhibaatooyinka ka yimaada boodada iyo shilinta, oo ay la socdaan qoryaha iyo buufinta - habka ugu caansan ee lagula dagaalamayo dulinka xayawaanka. Waa dad caalami ah, oo sahlan in la isticmaalo oo aan jaban. Aan isku dayno inaan fahamno iyaga si faahfaahsan. Sida loo dhaqmo Dhibcaha oo dhan waa isku mid. Maaddooyinka firfircoon waxay ku ururaan finanka, nalalka timaha, iyo dufanka subcutaneous.
Bilawga maalmaha diiran ee milkiilayaasha xayawaanka ah ma aha oo kaliya farxadda wadooyinka wadaagga ah, laakiin sidoo kale dhibaatada boodada, shilinta. Naaso yaryar ayaa matalaya halis caafimaad iyo nolol shakhsi shaggy, maadaama ay yihiin sidayaal cudurada faafa. Waa hab macquul ah oo ka dhan ah dhiig bixiyaha khatarta ah waa qoryo gaar ah.
Shalay ayaa xayawaankaaga xayawaankuna farxad iyo faraxsanaa, laakiin maanta waxay u muuqataa mid cakiran? Si dhaqsiyo leh ayuu uga soo baxaa qashin, qaniinkiisa dharkiisa yar yar ayuu ku dhaqaa? Inta badan, martida aan la socon - boodada - waxay heleen xayawaankaaga. Waxaad dhihi doontaa bisadu kama baxayso guriga, eeydu waxay ku socotaa dusheeda oo aan la kulmin xayawaanka kale mana ku dhici karto cayayaankaas.
Haddii boodada laga helo xayawaan, waxaa lagula talinayaa in tallaabooyinka la qaado isla markaaba, maxaa yeelay cayayaanku waxay keeni karaan waxyeello weyn xayawaanka. Ticks ma aha mid khatar ah, sidaa darteed marka xayawaanka lagu socdo waxaa lagu talinayaa in la ilaaliyo taxaddarrada. Marka aad dooranayso badeecada xakamaynta cayayaanka, marka hore, waa in aad diirada saartaa qeyb ka mid ah sheyga, maaddaama joogitaanka qadar badan oo kiimiko ah ay keeni karaan gubasho maqaarka ama sumoobidda sumowga jidhka.
Qaar badan oo ka mid ah guriga ayaa leh hamster. Inkasta oo uu yahay mid wanaagsan, waxaa laga yaabaa inuu sidoo kale boodo. Waxay ku nool yihiin oo keliya, laakiin sidoo kale u guurto xayawaanka kale ee ku nool qol isku mid ah. In la aqoonsado dulin ka yaryar wiil yar yar waa dhibaato, maxaa yeelay markasta waa nadiif. Si kastaba ha noqotee, waxaa suurtagal ah in la ogaado in wax qalad ah sababtoo ah xayawaanno badan iyo nabarrada hoostiisa oo hoosta ku yaalla.
Gabagabaynta in boodada ay ku noolaan karto qofku si joogto ah ayaa loo diiday. Ma ku noolaanayaan bini-aadamka, sida xaqiiqda, bisadaha, eeyooyinka, xayawaanka kale iyo shimbiraha. Waxay u isticmaalaan qof ahaan gaadiidka haddii aysan si lama filaan ah u helin shay ku habboon (eeyga, bisad, jiir, iwm)
Waxaad ku talaali kartaa dhammaan cudurada. Astronauts waxay ku nooshahay sanado badan saldhigga orbital. Bini'aadanku maahan maanta - berri waxay la qabsan doonaan kansarka iyo AIDS. Oo waxaynu ka cabsan karnaa! Tani ma aha mid la yaab leh. Waxay ku nooshahay 55 milyan oo sano ka hor. Xaaladaha dabiiciga ah ee ku dhintay mammoths ma aysan keenin waxyeellada ugu yar ee bukaan-socodka.
Qaxoontiga gudaha - dhibaato weyn Cayayaanka yare ee yar yar ayaa si qunyar ah u qaniinaaya kuna dhufanaya si dhakhso ah. Laakiin si ay u keenaan "dariska" waa inay si adag u shaqeeyaan. Cay kasta oo cayayaanka ahi maahan mid ku habboon burburinta dhiqlaha! Noocyada sunta cayayaanka ee ka hortagga udheerta Dheecaanku waa monopages kuwaas oo si gaar ah ugu diyaara dhiig, sidaas darteed ma jirto wax dhibic ah oo la isticmaalo bac.
Ka mid ah cayayaanka dhiigga nuugaya ee si weyn u dhimi kara nolosha bini'aadamka, meel gaar ah waxaa lagu qabtaa boodada. Waxay yihiin kuwo bacrin ah, waxay yihiin sidayaal cudurro halis ah, waxayna ku kala duwan yihiin in ay adag tahay in laga takhaluso. Qaniinyada xiiqda ayaa aad u xanuun badan. La dagaallanka dulinka guryaha gudaha ee guryaha iyo degaannada guryaha waxaa lagu fuliyaa siyaabo kala duwan.
Just a dhibic, laakiin sidii samatabbixin! Dhibaatooyinka ka yimaada boodada Faa'iido loogu talagalay bisadaha, tilmaamaha daroogada
Faa'idada (Advantage) - macneheedu waa in lagu carqaladeeyo boodada xayawaanka rabaayadda ah, oo ay sii daysay Bayer HealthCare AG. Inta lagu jiro jiritaanka, daroogada waxaa qiimeynay dhakhaatiir badan oo khibrad iyo khibrad leh. Wakiilka cayayaanka ayaa si weyn u ilaaliya xayawaanka guriga ka ilaaliya dulinka dhiigga nuugista, taas oo ah, marka loo eego, waxay yihiin sidayaal cudurada faafa ee badan.
Waxay u badan tahay inay adagtahay hadda in la helo qoys aan lahayn bisad, sababtoo ah iyada oo aan lahayn bisad waa agoonta! Waxay na siiyaan dhibaatooyin badan, waxay jeexayaan xayawaanka, waxay soo kacaan habeenkii, waxay ka xadaan sausage miiska, laakiin wali waan jecelnahay oo ma malayn karno nolosheena iyada oo aan ka helin feejignaan badan. Gaduud iyo madow, caddaan ah iyo caleemo, ciriiri iyo baaluqan, barafka caajis oo caajis ah iyo bisadaha oo iskooda ku socda - dhammaantood waa kuwa ugu caansan!
Kharash badan oo wax ku ool ah! Cannaani ka soo jeeda boodada iyo shilinta bisadaha
Celandine ama cawska cawska, sida ay dadku ugu yeeraan, waxay leeyihiin waxyaabo badan oo faa'iido leh. Daawooyin badan ayaa loo diyaariyaa iyada oo saldhig u ah, oo ay ku jiraan diyaarinta antiparasitic ee xayawaanka. Macnaheedu waa "Celandine" laga bilaabo boodada iyo shilinta bisadaha waa daawooyinka xoolaha. "Celandine" - khadka daawooyinka Diyaargarasyo ​​ka mid ah alkolada alkol celindin - daroogo xoog leh oo loo isticmaali karo taxadar, iyo si sax ah u raac tilmaamaha.
Dhib jeexjeexa qashinka ee ay soo saarto Bayer Animal Health Division oo ku takhasusay soo saarida xalalka cayayaanka ee xayawaanka. Waxay wax ku ool u yihiin iskudhaca dulinka dulinka dibedda ee dibedda ah (qaniinyada jilicsan, boodada), iyo gudaha (helminths). Sidaa daraadeed waxaan ku falanqeyn doonaa faahfaahin dheeraad ah habka loo yaqaan "Lawyer".
Shilinta iyo boodada ayaa ah kuwa halista ah ee cudurada oo keeni kara saameyn aan dib-u-dhac ku jirin jirka bini-aadamka. Wax khatar ah kuma laha nolosha xayawaanka. Si aad uga ilaaliso bisadkaaga qaniinka qaniinyada iyo caabuqa cudurka, waxaad isticmaali kartaa daawooyin ammaan ah. Daawada Leopard waxay ilaalinaysaa xayawaan waxayna dadka u oggolaaneysaa inaysan ka baqin inay keenaan cayayaanka waxyeello u geysta guriga.
Xayawaanka ma aha farxad weyn oo kaliya qoyska oo dhan, laakiin sidoo kale masuuliyad weyn. Xayawaanka aad jeceshahay way jiran yihiin si la mid ah mulkiilayaashooda. Dhibaatada ugu wayni waa dhiig-duurjinta dhiigga: injirta iyo boodada. Maanta, warshadaha dawooyinka ayaa bixiya qalab badan oo ka takhalusi kara xayawaanka bada.
Daboolka ka soo jeeda boodada iyo shilinta bisadaha waa mid fudud oo badbaado leh. Waa ku filan inaad ku ridato bisad oo aad illoobi karto dulin. Inkastoo aaney run ahayn. Aynu si fiican u fahanno su'aashan. Sida uu u shaqeynayo Kooladu waa cajalad caag ah oo leh dhar 30 illaa 40 sentimitir dherer ah, oo la geliyo daawooyinka antiparasitikada.
Waqtiyada markaa si fiican loo yareeyo waxay awoodi karaan iibsashada iyo hagaajinta bisad inay aad u yaraayeen. Hadda ma yartahay guri ama dabaq aan lahayn xayawaan dabacsan. Muhiim ma aha nooca xayawaanka ah ee ay tahay - bac muggeed leh ama cuur aan caadi ahayn. Kaliya xayawaan furan ayaa u muuqday dhibaatooyin la xidhiidha dayactirka iyo caafimaadka bisad.